Tsy mazoto hafindra toerana ireo mpivarotra | NewsMada
Tsy mazoto hafindra toerana ireo mpivarotra
Tsy mahavaha olana ny hoe fanomezana toerana azy ireo manokana na fampidirana azy ireo any anaty tsena. Tamin’ny fiandohan’ity taona ity, nentanina izy ireo hisoratra anarana, mora handaminana azy, araka ny hevitry ny kaominina, nefa tsy hita izay tohiny. Tsy mazoto amin’izany mihitsy ireo mpivarotra ireo. « Aty no mahazatra ny mpanjifa hifandraisany aminay sy mora hahitany anay, aty no mandeha ny varotra ataonay », hoy ny feo iraisan’izy ireo. Ny tsena rahateo tsy ampy. Efa nisy fotoana niarahan’ireo mpivarotra nitaky ny zony tsy hanaovana herisetra azy ireo, nefa io fanaovana herisetra io indrindra vao mainka mampihenjana ny fifandonana eo amin’ny roa tonta. Etsy andaniny, ny kaominina mitana ny heviny ary manarama olona mpitandro filaminana sy « be sandry ».
Tsy vahaolana ny fampiasan-kery
Fampiasan-kery indray ny ataon’ireo « be sandry » ireo miaraka amin’ny mpiasan’ny kaominina mpangorona entana. Tsy fantatra mankaiza ireny entana ireny, halatra ara-dalàna tsotra izao. Na asaina mandoa vola hatrany amin’ny 50.000 Ar, raha voalazan’ireo mpivarotra, izay mitady ny entana averina any aminy. Azo antoka anefa fa tsy miditra any anaty kitapom-bolan’ny kaominina izany vola izany.
Ary raha tena hanadio tokoa ny kaominina, enjeho manomboka amin’ireo mpamongady mpamatsy entana, mpivarotra rehetra eny Mahamasina, Isotry, 67 ha, Andravoahangy, Behoririka eo akaiky eo, sns, fa tsy ny eo Analakely ihany. Nahoana misy toerana sahin’ny kaominina kitihana ny hafa mangatsiatsiaka ? Mandeha indray ny feo fa misy amin’ireo mpivarotra any an-toeran-kafa ireo, fianakavian’ny mpiasan’ny kaominina ihany.